Iindaba-Uhlalutyo lwe-19 lwaseBeijing kunye noVavanyo lweNgxelo yeZifundo kunye neMiboniso
I-Huiyu fluid yaya kwi-BCEIA2019 kwaye iya kuya kwi-BCEIA2021 eBeijing. . Ndwendwela indawo kaHuiyu, 6A011 #, ukuze ufunde ngesampulu yokusebenza kweNkampani iPeristaltic Pump yonyango lwamanzi, elebhu, uphando lwezenzululwazi kunye nokusetyenziswa.
Ukongeza, yiza undwendwele umnquba wethu ukuze ufumane iinkcukacha ezingaphezulu. Siza kukubonelela ngesishwankathelo sendlela esebenza ngayo isampulu kaHuiyu kwaye uchaze ukuba zinokusetyenziswa njani kwizicelo eziqhelekileyo kusetyenziswa ezona ndlela zilungileyo ziye zaphuhliswa ngokusekwe kumava eNkampani.
Ke, hamba ngenqanawa ukuya kwindlwana engu- # 6A011 kwaye uthi molo ku-huiyu!
Ixhaswe yi-CAIA (Umbutho wase China wohlalutyo lwezixhobo), iNkomfa yaseBeijing kunye noMboniso woHlahlelo lwezixhobo (i-BCEIA) yinkomfa yezixhobo zohlalutyo ezihlonitshwe kakhulu nezihlonitshwayo e-China. Emva kokubanjelwa kunye nokuphuhliswa ngaphezulu kweminyaka engama-30, i-BCEIA iya isiba nodumo kwihlabathi liphela, kunye nababonisi kunye nabathathi-nxaxheba abavela kumazwe angaphezu kwama-20 nama-30 ngokwahlukeneyo, ukuthatha inxaxheba kumsitho omkhulu rhoqo ngonyaka. Inani labathathi-nxaxheba liye lenyuka ngokuthe ngcembe kwaye ngo-2017 inani labathathi-nxaxheba ababhalisiweyo lingaphezulu kwama-25,000, kwaye iingcali ezibhalisiweyo zeNkomfa yezeMfundo yafikelela kuma-3 400.
Ukusebenza njengeqonga lokubonisa itekhnoloji entsha, izixhobo ezitsha kunye nezixhobo ezitsha, uMboniso we-BCEIA uhlala utsala umdla kwihlabathi liphela kwiingcali, abaphengululi kunye nabasebenzi besayensi kunye netekhnoloji. Kwiminyaka yakutshanje, umndilili wezixhobo ezitsha kunye nezixhobo ezitsha ziye zaboniswa zaboniswa kuMboniso ngamnye kwixesha elidlulileyo. Ababonisi banxibelelana nabathathi-nxaxheba buqu kwiingcinga eziphambili zohlalutyo lwezixhobo, iimveliso kunye neetekhnoloji kunye nezisombululo.
Inkomfa yezemfundo ibalulekile kwaye iyinxalenye ye-BCEIA, kwaye ibisoloko izinikele ekukhuthazeni ubuchwephesha bezobunzululwazi obunqabileyo. Inkomfa ngoku iqulethe isifundo esipheleleyo, iiseshoni ezili-10 ezifanayo, iiforamu kunye neentlanganiso kunye neziganeko ezifanayo. Inkomfa inemixholo eyahlukeneyo kubandakanya iingxoxo malunga nemigaqo emitsha, iindlela kunye neetekhnoloji.
Inkomfa yezemfundo yindibano ebalaseleyo yeengcali ezihlonitshwayo ebaleni. Iingcali ezivela kumaziko emfundo kwihlabathi jikelele kunye namaziko anike iintetho kwezona ngxoxo zixabisekileyo kwicandelo lohlalutyo.
Le nkomfa inedumela elihle kwaye idlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni utshintshiselwano lwenzululwazi nobuchwephesha kwilizwe liphela kunye nokuphuhliswa kwesayensi yohlalutyo kunye netekhnoloji yokuvelisa izixhobo e China.
"Uhlalutyo lweNzululwazi luyila ikamva", sijoyine kwinkomfa yemfundo ye-BCEIA ezayo kwaye sikhuthazeke!